အေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားကိုု ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုုင့္သည့္နည္းလမ္းမ်ား – Gentleman Magazine
အေရျပားေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားကိုု ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုုင့္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးတိုု႕ ၾကည့္ရဆိုုးတဲ့ အေၾကာျပတ္ျခင္း ေ၀ဒနာမွ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုုင္ၾကပါေစ။
အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အကြောပြတ်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင့်သည့်နည်းလမ်းများ
သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောပြတ်ခြင်းသည် လူအများစုတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ရောဂါတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များပြီး ပေါင်၊ ခြေသလုံး၊ ဝမ်းဗိုက် နှင့် အခြားနေရာတော်တော်များများမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အင်မတန်မှ ကြည့်ရဆိုးလှတဲ့ ရောဂါတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က သတိတောင်မထားမိကြသလို တချို့ကျတော့လည်း ပျောက်ကင်းစေမဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေနေကြပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးမှာက အိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အကြောပြတ်ခြင်းဝေဒနာကို ကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများကို ဖတ်ရှုပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ အလွယ်တကူ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်အသုံးျ႔ပုနိုင်ပါတယ်။
သကြားသည်အကြောပြတ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင့်သည့် အကောင်းဆုံး အိမ်တွင်း ကုထုံးတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကတော့ ပထမဆုံး သကြားကို စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းယူပါ။ ပြီးနောက် မက်မွန်သီးဆီ နှင့် သံပုယို သီးရည်( ရှောက်ရည်) အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ အားလုံးကို ရောသမမွှေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အကြောများ ပြတ်နေသောနေရာများတွင် ၈မိနစ် ၁၀ မိနစ် ခန့် အသားထဲဝင်အော လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ရေးအေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ အိမ်သုံး သကြားကုထုံးကို တနေ့တကြိမ် တစ်လ ခန် ပုံမှန် ပြုလုပ်ပေးလိမ်းပေးခြင်း အားဖြင့် အကြောပြတ်ခြင်း ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်များကြွယ်ဝစွာပါတဲ့ အားလူးဟာလဲ အိမ်တွင်းလွယ်လွယ်ကူကူရတဲ့ ပစ္စည်းတမျိုးပါပဲ။အာလူးဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကလာပ်စည်းများကို ကြီးထွားစေခြင်းအတွက် အထောက်ကူပြုပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပထမဆုံး အာလူးကို အနေတော်လောက် ခပ်ထူထူလေးလှီးလိုက်ပါ။ ပြီးနောက် လှီးထားသော အာလူးကို အကြောပြတ်နေတဲ့ နေရာမှာ အာလူးအရည်များခြောက်သွေ့သွားသည်အထိ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ပွတ်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်လို့ရပါပြီ။ ဒီကုထုံးကလဲ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ် လောက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အလွယ်ကူဆုံး ကုထုံးပါပဲ။ နေ့စဉ်သောက်သုံးနေတဲ့ ရေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အောက်ဆီဂျင် နဲ့ အာဟာရဓါတ်များကို သယ်ဆောင်လာပေးပါတယ်။ ရေသောက်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရောဂါ ပြသာနာ များကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေကို စိုပြေလှပစေပါတယ်။
ဒါကြောင့်တနေ့ကို ရေ ၁၀ ခွက် သောက်ခြင်းဟာလဲ အသားရေ နူးညံ့မှု နဲ့ ဆဲလ်အသစ်များမွေးဖွားမှု နဲ့ အကြောပြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရေးအကြောင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ သောက်ရမည့် ပမာဏကတော့ တနေ့ ၁ဝခွက်ပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော အရေပြားရောဂါ များ နဲ့ တင်းရင်းသောအသားအရေ အတွက် အကောင်းဆုံး အာနိသင်ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပက်ကုထုံးကတော့ ရှားစောင်းလက်ပတ် အပင်ကို ထက်ခြမ်းခွဲ အတွင်းရှိ ဂျယ်လီပုံစံ အကြည်ရောင် အသားလေးများဖြင့် အကြောပြတ်တဲ့ နေရာကို တိုက်ရိုက် အသားထဲ စိမ့်ဝင်အောင်လိမ်းပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးချလိုက်ပါ။
နောက်တမျိုးရှိပါသေးတယ်…. ရှားစောင်းလက်ပတ်ရည်ကို လက်ဖက်ရည်ခွက်ဖြစ့် ၄ပုံ ပုံ တစ်ပုံ စာယူလိုက်ပါ… ဗီတာမင်အေ အဆီ ၅တောင့် နဲ့ ဗီတာမင်အီး ၁၀တောင့် ပါထည့် ပြီးတော့ ရောသမမွှေ အရည်ကို အကြောပြတ်တဲ့အပေါ်မှာလိမ်း ခြောသွေ့သွားအောင်ထားပြီး ရေနွေးနွေး နဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ ဒါတွေကလဲ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သံလွင်ဆီဟာလဲ အန်တီအောက်စီးဒန့် နဲ့ အဟာရများစွာပါဝင်လို့ အကြောပြတ်ခြင်းအတွက် ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်…. သံလွင်ဆီကို အပူအနည်းငယ်ပေး ပြီးရင် အကြောပြတ်နေတဲ့ နေရာပေါ်တွေမှာညင်သာစွာလိမ်းပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်လည်း သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေပြီး အကြောပြတ်ခြင်းများလျော့ပါပျောက်ကင်းသွာပါလိမ့်မယ်။ ဒီကုထုံးကတော့ တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်လောက် လိမ်းပေးရပါမယ်။
၆။သံပုယိုရည် (မရှိရင် ရှောက်ရည်)
သံပုယို ရည်မှာ အက်ဆစ်ဓါတ်ပါဝင်မှုကြောင့် အကြောင်ပြတ်ခြင်းအပြင်။ ဝက်ခြံ။ အရေပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို လည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကတော့ သံပုယိုရည်ကို အကြောပြတ်တဲ့ နေရာပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းပုံစုံ ဖြင့် ညင်သာစွာနှိပ်နှယ်လိမ်းပေးပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာရင်တော့ ရေနွေးနဲ့ ဆေးချလိုက်လို့ရပါပြီ။ သံပုယိုအရည်ထဲမှာ သခွားသီးအရည် ကိုလဲ ရောထည့် နိုင်ပါတယ်။ ဒီကုထုံးက တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်ပါ။
ကြက်ဆူဆီဟာ အရေပြားမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အမည်းစက်များ၊ မှဲ့ များ၊ အနာရွတ်များ၊ ဝတ်ခြံများ နှင့် ဒဏ်ရာအစင်းရာ များကိုလဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အဆီတမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် ခုကြက်ဆူဆီကို အသုံးပြုကြည့်ပါမယ်။ ကြက်ဆူဆီကို အကြောပြတ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ စက်ပုံစံ လိမ်းပေးပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့် နှိပ်နှယ်ပေးပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ထားပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ အဝတ်စ နဲ့ ပတ်တီးစီးသလို ထုတ်ပေးပါ။ အပေါ်ကမှ ရေနွေးအိတ် ရေနွေးအိတ်မရှိလဲ ရေနွေးကို ပုလင်းထဲ ထပ်ပြီး အပြင်ဘက်မှာကပ်ပေးခြင်းဖြစ်လဲ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ တစ်လတိတိ တနေ့တကြိမ် တစ်ခါကပ်ရင် နာရီဝက် ခန့်ပုံမှန် ကပ်ပေးရမှာပါ။
ကိုကိုးထောပတ်ဟာလည်း သွေးလည်ပတ်မှု အားကောင်းစေဖို့ ကူညီပေးရုံမကပဲ အခုအကြောပြတ်မှု တွေအတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကတော့ ကိုကိုးထောပတ်ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ခန္ဓာက်ိုယ် ပေါ်က အကြောပြတ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ လိမ်းပြီး နှိပ်နှယ်ပေးပါ။ ဒီကုထုံးကတော့ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် နှစ်လတိတိ ပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။
နည်းလမ်းများစွာရှိတဲ့ အနက်မှာမှ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ ကြည့်ရဆိုးတဲ့ အကြောပြတ်ခြင်း ဝေဒနာမှ သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ကြပါစေ။
Previous: သမိုင္းတေလွ်ာက္ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂိၢဳဟ္ (၁၀)ဦး
Next: လဲွေလ်ာင္းၿပီး တရား႐ႈမွတ္ျခင္း